Umklomelo we-VII wamazwe omhlaba i-FNAC-SINS ENTIDO | Izincwadi Zamanje
Ukubuyela komunye wemiklomelo yodumo oluthile ezweni lethu kubuyile. Sikhuluma ngakho I-VII International Award FNAC-SINS ENTIDO. Uma kukhona ongakhumbuli okwenzekile ngonyaka odlule, ngizovuselela inkumbulo yakhe ngokusho ukuthi umdwebi wekhathuni waseValencian Ngizwa Llobel Nguyena owayehambisa ikati emanzini liyokwenza umsebenzi wakhe Udokotela oyi-rookie.
Isikhathi esinqunyelwe sokuqala ukuthumela imisebenzi ezohlolwa sesivele sivulekile futhi Izovalwa ngoNovemba 29 nonyaka, lapho kukhona ububanzi bokulungiselela amahlaya ngekhwalithi uma kungashiywanga umzuzu wokugcina. Njengesikhumbuzo futhi, njengoba siqoke owaphumelela wokugcina, ukusho ukuthi kusukela kuhlelo lokuqala, amagama abaphumelele abe Jorge González (2007), UGuillaume Trouillard noSamuel Stento (2008), U-Esteban Hernandez (2009), UMireia Pérez (2010) futhi UJuan Berrio (2011). Amanye amagama, njengalawo amathathu okugcina, asevele esaziwa ngongoti nabantu abasebenza emhlabeni, okuqinisekisa ukuthi umncintiswano uma kukhulunywa ngokulangazelela ukuwina le miklomelo unzima impela. Ngemuva kwalokho ngikushiya nezisekelo zekholi uma kungenzeka ukuthi kukhona kini abakhuthazwayo ukuthi babambe iqhaza. Ukubona kusho lezisekelo vele uchofoze Qhubeka ufunda.
Zibhalwe ngokukhethekile ngeSpanishi.
• Azishicilelwanga ezakhini (azishicilelwanga ngencwadi, nge-elekthronikhi, nge-Inthanethi, noma nge-serial kumagazini).
Isimo esizokwethulwa emncintiswaneni singamahlaya, ngefomethi yaso yenoveli. Umbhali ngamunye kufanele ahambise isiphakamiso sencwadi esinamakhasi okungenani ayi-16 (96) aqediwe ohlangothini olulodwa kuphela; Ubude bokugcina, obunqobile, kuzoba ubuncane bamakhasi ayisishiyagalolunye nesithupha (16). Ingalethwa ngombala omnyama nomhlophe noma umbala, kufakwa idosisi enamakhasi aqediwe ayishumi nesithupha (4), nesihloko sawo esihambisanayo, kumakhophi aphrintiwe ngefomethi ye-DIN-A2, kanye nesichasiselo esinemininingwane (amakhasi amabili (XNUMX) kwelilodwa eceleni okungenani) nokuqukethwe yindaba ephelele.
Imisebenzi izothunyelwa noma ihanjiswe, ekhombisa emvilophini "VI International Prize for Graphic Novel Fnac-Sins Entido", ekhelini elilandelayo leposi: Ediciones Sins Entido / Calle Barquillo 11, 2º office 2, 28004 Madrid / Premio @ sinentido. es
Umnqamulajuqu wokwamukelwa kweziphakamiso uzovalwa ngoLwesihlanu, Novemba 29, 2013.
Ijaji lizohlangana ekupheleni kuka-2013 bese isinqumo sizomenyezelwa ngoJanuwari 2014. Umbhali ozonqoba uzozibophezela ukuletha iphrojekthi eqediwe ngesonto eledlule likaJuni 2014. Umsebenzi wokuwina uzoshicilelwa ekupheleni kuka-2014.
I-Fnac izoletha umklomelo owodwa futhi ongahlukaniseki wama-euro ayizinkulungwane eziyishumi (eziyizinkulungwane eziyishumi) (okumele akhokhwe ngezinkokhelo ezimbili: ama-10.000% ngenani ngemuva kokuxhumana kwesinqumo; kanye ne-50% esele ngesikhathi sokushicilelwa). Umsebenzi ozowina uzoshicilelwa ngu-Ediciones Sins Entido, ozobhekana nomsebenzi wokukhiqiza nokuhlela, bese kuthi owinile asayine inkontileka nalo mshicileli isikhathi esiyiminyaka eyi-0, esivuselelekayo nephesenti lobukhosi elingu-50%. Ukunikezwa kwalo mklomelo kusho ukuthi u-Ediciones Sins entido uzophatha kuphela wonke amalungelo okuxhashazwa womsebenzi, kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izilimi, kanye nawo wonke amalungelo okushicilela kuyo yonke imithombo yezindaba.
I-Tel.: 91 522 3241
Imininingwane engaphezulu - USento Llobel owine i-VI Fnac- Sins Entido Award
Umthombo - I-AACE
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » I-VII International Award FNAC-SINS ENTIDO
UDkt Miguel Ruiz - Izivumelwano ezine